လျှာပေါ်မွှေးပျံ့အီစိမ့်သွားမယ့် ဒူးရင်းမီးဖုတ်ရတဲ့ တစ်ဆိုင်တည်းသော ဒူးရင်းတို့နိဗ္မာန်
30 Apr 2018 . 6:36 PM
ဒီချိန် ရာသီဥတုမျိုးဆိုတာ လေညင်းလေးတစ်ချက် ဝှေ့တိုက်ရင်တောင် လေထဲမှာ ဒူးရင်းသီးနံ့တွေ လှိုက်မွှေးတက်လာတဲ့ ဒူးရင်းခါမီ ဒီရာသီပဲ မဟူတ်ဘူးလား ဘော်ဘော်တို့။
Facebook ပေါ်မှာလဲ ဒူးရင်းသီး၊ လမ်းထိပ်မှာလည်း ဒူးရင်းသီး၊ မျက်လုံးထဲမှာလည်း ဒူးရင်းသီး၊ လေထဲမှာတောင် ဒူးရင်းသီးနံ့လေးတွေပျံ့နေတဲ့ ဒူးရင်းသီးရာသီ တစ်ပတ်လည်ပြီဆိုတော့ ဒူးရင်းသီးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မိုင်ဝေးဝေးကဖြတ်လျှောက်ရင်တောင် ခေါင်းမူးတတ်တဲ့အမျိုးပေမယ့် ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒူးရင်းသာ အချစ်၊ ဒူးရင်းသာ ကမ္ဘာ၊ ဒူးရင်းမွှာတွေ ကြားမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နွှာရင်း စားရင်း အရသာခံပါလိမ့်။
ဒီလို ဒူးရင်းသီးသရဲတွေ၊ ဒူးရင်းဆိုမှ ဒူးရင်း အရသာအရှိဆုံးထင်မှတ်သူတွေအတွက်ဆို အသီးလိုက်အမွှာလိုက်ကြီး စားရသောက်ရတာ ရိုးလာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုများ ထပ်ကွန့်ပြီးစားလို့ရဦးမှာပါလိမ့်? ဒါဆိုရင်တော့ လာပါပြီရှင်။
အနံ့နဲ့တင် ရီဝေသွားမယ့် ချိုအီမွှေးနေတဲ့ ဒူးရင်းသီးအကိတ်အမွှာကြီးတွေကိုမှ အရသာရော၊ အနံ့ပါ ပြင်းပြင်းရှရှ လှိုင်တက်လာအောင် အမွှာလိုက်မီးဖုတ်ပြီး အုန်းနို့လေးဆမ်း၊ ကောက်ညှင်းလေးနဲ့ ပါးစပ်ဖျားထဲ အီစိမ့်ရူးသွပ်သွားအောင် စားလို့ရမယ့် ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်ရတဲ့ ကိတ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတော့ တွေ့ပါပြီတဲ့။
ဒူးရင်း မီးဖုတ်၊ ဒူးရင်း Cheese Cake ၊ ဒူးရင်း Pillow ၊ ဒူးရင်း Bag ၊ ဒူးရင်း ဖျော်ရည် ဒူးရင်းနဲ့ပတ်သက်တာများ…အို…စုံလို့ လင်လို့ ဒူးရင်းသီးခရေဇီ တွေ ဆိုင်ထဲရောက်တာနဲ့ ခနလေး လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားစေမယ့် ဆိုင်လေး နာမည်က ” Paradise Bakery ” ပါတဲ့။
သူ့ဆိုင်လေးက သိပ်မထင်ရှား လူမသိသေးပေမယ့် ဒီလတ်တလောမှ Facebookပေါ်မှာတက်လာတဲ့ ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်အယ်စတုံပုံကြီးတွေနဲ့ အရောက်မလာလာချင်အောင် ဖမ်းစားထားတော့ ဒူးရင်းကြိုက်တဲ့ အခရာပရိသတ်တွေအတွက် သွားခဲ့စားခဲ့တာလေး အရသာအမှန်အတိုင်း သတင်းပို့ပေးလိုက်ပြီနော်။
ဆိုင်လေးက အလုံမြို့နယ်၊ သရဖီလမ်း၊ အမှတ် ၁၆၊ မြေညီထပ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်လေး။ သူ့ဆိုင်လေးက ကျဉ်းတယ်။ တော်တော်ကျဉ်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အမိုးတွေမြင့်လွန်းလို့ စိတ်မမွန်းကျပ်ရဘူး။ စားပွဲခုံလေး ၂ခုံ၊ ၃ ခုံ၊ ဘေးတိုက် Bar ပုံစံ ခုံတန်းလေးတွေနဲ့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နံရံက သစ်စေးရောင်လေးကိုမှ ချစ်စရာ လူငယ်ဆန်ဆန်လေး အလှဆင်ထားတယ်။ ကျောင်းသူလေးတွေ လာအထိုင်များတယ် (ချစ်စရာ ချောချောလေးတွေ)။ လူကြီးတွေ အပျင်းပြေဆော့စရာ ဒိုးဆက်တို့ တခြား Gameလေး၊ ကစားစရာလေးတွေရှိတယ်။
စားစရာအနေနဲ့ဆို အပေါ်ကပြောတဲ့ ဒူးရင်း အကုန်အစုံရတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထင် ဒူးရင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်နီးပါး ရာသီအလိုက်ရောင်းတဲ့ပုံပဲ။ တခြားကိတ်ဆို Rainbow Crepe Cake ၊ Chocolate Cake နဲ့ တခြား နည်းနည်းပါးပါးရတယ်။
ဒူးရင်းတွေကတော့ ကိတ်တန်းကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သရေကျချင်စရာကြီး။ ဒူးရင်းဖတ်တွေဆိုတာ လာပါစားပါ ခေါ်နေသလိုပဲ ( ကြိုက်တဲ့သူတွေ ပြောပါတယ် 😁) တခြား Soda ၊ Coffee ၊ Juice နဲ့ ထိုင်းစားစရာခေါက်ဆွဲပြုတ်ဘာညာ နည်းနည်းမဆိုစလောက်လေးရတယ်။
မှာခဲ့တာတွေဆို မမှာမဖြစ် ဆိုင်ရဲ့ဇာတ်လိုက် ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ် သူ့အရသာလေးက ဘယ်လိုပြောရမလဲဆို…..?
စားပွဲပေါ်လာချပေးတည်းက ဒူးရင်းသီးနံ့က မွှေးပြီးလှိုင်တက်လာတာ။ ဒူးရင်းသီးအသားလေးတွေက ဝါတင်းပြီး တချို့အပိုင်းလေးတွေ မီးဖုတ်ထားတဲ့အခံကြောင့် အညိုရောင်လေးကိုသန်းလို့။ ဘေးမှာ နို့စိမ်းခွက်လေးနဲ့ ကောက်ညင်းစေးလေး။ အဲ့ဒီ ဒူးရင်းသီး မီးဖုတ်လေးပေါ် နို့လေးဆမ်း၊ ကောက်ညှင်းလေးနဲ့ တွဲပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ရင် ပါးစပ်ထဲတစ်ခုလုံး မွှေးပြီး အီဆိမ့်မွှေးသွားတာ။ ဒူးရင်းသီးက အစေ့တော့ ကြီးတယ်။ အချိုပေါ့သေးတယ်။ အချိုပြင်းပြင်းလေးနဲ့ လေးလေး လေးဆို ပိုကောင်းမယ်။ ခုတော့ ဒူးရင်းသီးက အစေ့ကြီးပြီး အသားအချိုပေါ့သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် စားကောင်းတယ်။ မွှေးနေရော။ သူက ၅၀၀၀ တဲ့။ တစ်ပွဲမှာ ၃ မွှာပါတယ်။
ဒူးရင်းသီး Cheese Cake
မထင်ထားဘူး။ ကောင်းတာက အီလေးဆိမ့် မွှေးနေရော။ Cheese နဲ့ ဒူးရင်းရောထားတဲ့ ကိတ်သားအိအိမွှေးမွှေးလေးပေါ်မှာ ဒူးရင်းသီးအဖတ်တွေဆိုတာ တကယ်အဖတ်လိုက်လေးတွေ။ တစ်လုပ်ဆို တစ်လုပ် ရှယ်ပဲ။ လေးလေးလေးနဲ့ ချိုအီမွှေးလေး။ သူ့တော့ တကယ်ကြိုက်မိတယ်။ ၃၀၀၀ တဲ့။
လုံးဝမချိုအီနေဘူး။ ဆိမ့်ပြီး မွှေးတယ်။ ဒူးရင်းသီးအဖတ်လေးတွေပါတယ်။ အဖတ်လေးတွေက မာတယ်။ တစ်ခွက်ကို အပြည့်ကြီးတော့မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆိမ့်ဆိမ့်အေးအေးလေးနဲ့ သောက်ကောင်းတယ်။သူလည်း ၃၀၀၀ တဲ့။
ဝန်ဆောင်မှုဆို လုပ်ပြီးသားမို့ မြန်တယ်။ တာဝန်ကျေရုံပဲ။ နွေးထွေးဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်ကိုအကြာကြီးတော့ မစောင့်စေပါဘူး။
ဒူးရင်း Pillow လေးက ၁၅၀၀။ ဒူးရင်း Crepe က တစ်စိတ် ၃၀၀၀ ။ ဒူးရင်းပူတင်းလို ပွဲကြီးလည်းရှိတယ်။ သူလည်း ၃၀၀၀။ ဈေးလေးတွေက ဒူးရင်းသီးကို ဒီတိုင်းကြီးမစားချင်ဘူးဆို အရသာဆန်းဆန်းစားရမယ် တန်တယ်။ ဒူးရင်းသီးသရဲတွေတော့ သွားဖြစ်အောင်သွား၊ စားဖြစ်အောင်စားစေချင်မိတယ်။ ဪ…ဒူးရင်းမီးဖုတ်က ပွဲအရေအတွက်နဲ့မို့ လာစားမယ်ဆို လာခါနီး ဖုန်း 09772797821၊ 0977279812 ကို ကြိုမှာထားပေးရပါတယ်တဲ့။
ကဲ…..ဒူးရင်းသရဲတွေ အတွက် ဒူးရင်းအရသာစုံနေပြီဆို ဒူးရင်းမီးဖုတ်လေးတော့ ဘယ်လိုအရသာလဲဆိုတာ ဒီ Paradise Bakery မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာမြည်းကြည့်ပါဦးလို့။
လြှာပျေါမှေးပြံ့အီစိမျ့သှားမယျ့ ဒူးရငျးမီးဖုတျရတဲ့ တဈဆိုငျတညျးသော ဒူးရငျးတို့နိဗ်မာနျ
ဒီခြိနျ ရာသီဥတုမြိုးဆိုတာ လညေငျးလေးတဈခကျြ ဝှတေို့ကျရငျတောငျ လထေဲမှာ ဒူးရငျးသီးနံ့တှေ လှိုကျမှေးတကျလာတဲ့ ဒူးရငျးခါမီ ဒီရာသီပဲ မဟူတျဘူးလား ဘျောဘျောတို့။
Facebook ပျေါမှာလဲ ဒူးရငျးသီး၊ လမျးထိပျမှာလညျး ဒူးရငျးသီး၊ မကျြလုံးထဲမှာလညျး ဒူးရငျးသီး၊ လထေဲမှာတောငျ ဒူးရငျးသီးနံ့လေးတှပြေံ့နတေဲ့ ဒူးရငျးသီးရာသီ တဈပတျလညျပွီဆိုတော့ ဒူးရငျးသီးမကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ မိုငျဝေးဝေးကဖွတျလြှောကျရငျတောငျ ခေါငျးမူးတတျတဲ့အမြိုးပမေယျ့ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ ဒူးရငျးသာ အခဈြ၊ ဒူးရငျးသာ ကမ်ဘာ၊ ဒူးရငျးမှာတှေ ကွားမှာ ပြျောပြျောပါးပါး နှာရငျး စားရငျး အရသာခံပါလိမျ့။
ဒီလို ဒူးရငျးသီးသရဲတှေ၊ ဒူးရငျးဆိုမှ ဒူးရငျး အရသာအရှိဆုံးထငျမှတျသူတှအေတှကျဆို အသီးလိုကျအမှာလိုကျကွီး စားရသောကျရတာ ရိုးလာပွီဆိုရငျတော့ ဘယျလိုမြား ထပျကှနျ့ပွီးစားလို့ရဦးမှာပါလိမျ့? ဒါဆိုရငျတော့ လာပါပွီရှငျ။
အနံ့နဲ့တငျ ရီဝသှေားမယျ့ ခြိုအီမှေးနတေဲ့ ဒူးရငျးသီးအကိတျအမှာကွီးတှကေိုမှ အရသာရော၊ အနံ့ပါ ပွငျးပွငျးရှရှ လှိုငျတကျလာအောငျ အမှာလိုကျမီးဖုတျပွီး အုနျးနို့လေးဆမျး၊ ကောကျညှငျးလေးနဲ့ ပါးစပျဖြားထဲ အီစိမျ့ရူးသှပျသှားအောငျ စားလို့ရမယျ့ ဒူးရငျးသီးမီးဖုတျရတဲ့ ကိတျဆိုငျကောငျးကောငျးလေးတော့ တှပေ့ါပွီတဲ့။
ဒူးရငျး မီးဖုတျ၊ ဒူးရငျး Cheese Cake ၊ ဒူးရငျး Pillow ၊ ဒူးရငျး Bag ၊ ဒူးရငျး ဖြျောရညျ ဒူးရငျးနဲ့ပတျသကျတာမြား…အို…စုံလို့ လငျလို့ ဒူးရငျးသီးခရဇေီ တှေ ဆိုငျထဲရောကျတာနဲ့ ခနလေး လောကကွီးနဲ့ အဆကျပွတျသှားစမေယျ့ ဆိုငျလေး နာမညျက ” Paradise Bakery ” ပါတဲ့။
သူ့ဆိုငျလေးက သိပျမထငျရှား လူမသိသေးပမေယျ့ ဒီလတျတလောမှ Facebookပျေါမှာတကျလာတဲ့ ဒူးရငျးသီးမီးဖုတျအယျစတုံပုံကွီးတှနေဲ့ အရောကျမလာလာခငျြအောငျ ဖမျးစားထားတော့ ဒူးရငျးကွိုကျတဲ့ အခရာပရိသတျတှအေတှကျ သှားခဲ့စားခဲ့တာလေး အရသာအမှနျအတိုငျး သတငျးပို့ပေးလိုကျပွီနျော။
ဆိုငျလေးက အလုံမွို့နယျ၊ သရဖီလမျး၊ အမှတျ ၁၆၊ မွညေီထပျမှာရှိတဲ့အိမျဆိုငျလေး။ သူ့ဆိုငျလေးက ကဉျြးတယျ။ တျောတျောကဉျြးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမိုးတှမွေငျ့လှနျးလို့ စိတျမမှနျးကပျြရဘူး။ စားပှဲခုံလေး ၂ခုံ၊ ၃ ခုံ၊ ဘေးတိုကျ Bar ပုံစံ ခုံတနျးလေးတှနေဲ့ ဒီလောကျပါပဲ။ နံရံက သဈစေးရောငျလေးကိုမှ ခဈြစရာ လူငယျဆနျဆနျလေး အလှဆငျထားတယျ။ ကြောငျးသူလေးတှေ လာအထိုငျမြားတယျ (ခဈြစရာ ခြောခြောလေးတှေ)။ လူကွီးတှေ အပငျြးပွဆေော့စရာ ဒိုးဆကျတို့ တခွား Gameလေး၊ ကစားစရာလေးတှရှေိတယျ။
စားစရာအနနေဲ့ဆို အပျေါကပွောတဲ့ ဒူးရငျး အကုနျအစုံရတယျ။ ကိုယျ့စိတျထငျ ဒူးရငျးနဲ့ပတျသကျတာအကုနျနီးပါး ရာသီအလိုကျရောငျးတဲ့ပုံပဲ။ တခွားကိတျဆို Rainbow Crepe Cake ၊ Chocolate Cake နဲ့ တခွား နညျးနညျးပါးပါးရတယျ။
ဒူးရငျးတှကေတော့ ကိတျတနျးကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ သရကေခြငျြစရာကွီး။ ဒူးရငျးဖတျတှဆေိုတာ လာပါစားပါ ချေါနသေလိုပဲ ( ကွိုကျတဲ့သူတှေ ပွောပါတယျ 😁) တခွား Soda ၊ Coffee ၊ Juice နဲ့ ထိုငျးစားစရာခေါကျဆှဲပွုတျဘာညာ နညျးနညျးမဆိုစလောကျလေးရတယျ။
မှာခဲ့တာတှဆေို မမှာမဖွဈ ဆိုငျရဲ့ဇာတျလိုကျ ဒူးရငျးသီးမီးဖုတျ သူ့အရသာလေးက ဘယျလိုပွောရမလဲဆို…..?
စားပှဲပျေါလာခပြေးတညျးက ဒူးရငျးသီးနံ့က မှေးပွီးလှိုငျတကျလာတာ။ ဒူးရငျးသီးအသားလေးတှကေ ဝါတငျးပွီး တခြို့အပိုငျးလေးတှေ မီးဖုတျထားတဲ့အခံကွောငျ့ အညိုရောငျလေးကိုသနျးလို့။ ဘေးမှာ နို့စိမျးခှကျလေးနဲ့ ကောကျညငျးစေးလေး။ အဲ့ဒီ ဒူးရငျးသီး မီးဖုတျလေးပျေါ နို့လေးဆမျး၊ ကောကျညှငျးလေးနဲ့ တှဲပွီး ပါးစပျထဲထညျ့လိုကျရငျ ပါးစပျထဲတဈခုလုံး မှေးပွီး အီဆိမျ့မှေးသှားတာ။ ဒူးရငျးသီးက အစတေ့ော့ ကွီးတယျ။ အခြိုပေါ့သေးတယျ။ အခြိုပွငျးပွငျးလေးနဲ့ လေးလေး လေးဆို ပိုကောငျးမယျ။ ခုတော့ ဒူးရငျးသီးက အစကွေီ့းပွီး အသားအခြိုပေါ့သလိုပဲ။ ဒါပမေယျ့ စားကောငျးတယျ။ မှေးနရေော။ သူက ၅၀၀၀ တဲ့။ တဈပှဲမှာ ၃ မှာပါတယျ။
ဒူးရငျးသီး Cheese Cake
မထငျထားဘူး။ ကောငျးတာက အီလေးဆိမျ့ မှေးနရေော။ Cheese နဲ့ ဒူးရငျးရောထားတဲ့ ကိတျသားအိအိမှေးမှေးလေးပျေါမှာ ဒူးရငျးသီးအဖတျတှဆေိုတာ တကယျအဖတျလိုကျလေးတှေ။ တဈလုပျဆို တဈလုပျ ရှယျပဲ။ လေးလေးလေးနဲ့ ခြိုအီမှေးလေး။ သူ့တော့ တကယျကွိုကျမိတယျ။ ၃၀၀၀ တဲ့။
လုံးဝမခြိုအီနဘေူး။ ဆိမျ့ပွီး မှေးတယျ။ ဒူးရငျးသီးအဖတျလေးတှပေါတယျ။ အဖတျလေးတှကေ မာတယျ။ တဈခှကျကို အပွညျ့ကွီးတော့မပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဆိမျ့ဆိမျ့အေးအေးလေးနဲ့ သောကျကောငျးတယျ။သူလညျး ၃၀၀၀ တဲ့။
ဝနျဆောငျမှုဆို လုပျပွီးသားမို့ မွနျတယျ။ တာဝနျကရြေုံပဲ။ နှေးထှေးဖို့ လိုသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဧညျ့သညျကိုအကွာကွီးတော့ မစောငျ့စပေါဘူး။
ဒူးရငျး Pillow လေးက ၁၅၀၀။ ဒူးရငျး Crepe က တဈစိတျ ၃၀၀၀ ။ ဒူးရငျးပူတငျးလို ပှဲကွီးလညျးရှိတယျ။ သူလညျး ၃၀၀၀။ ဈေးလေးတှကေ ဒူးရငျးသီးကို ဒီတိုငျးကွီးမစားခငျြဘူးဆို အရသာဆနျးဆနျးစားရမယျ တနျတယျ။ ဒူးရငျးသီးသရဲတှတေော့ သှားဖွဈအောငျသှား၊ စားဖွဈအောငျစားစခေငျြမိတယျ။ ဪ…ဒူးရငျးမီးဖုတျက ပှဲအရအေတှကျနဲ့မို့ လာစားမယျဆို လာခါနီး ဖုနျး 09772797821၊ 0977279812 ကို ကွိုမှာထားပေးရပါတယျတဲ့။
ကဲ…..ဒူးရငျးသရဲတှေ အတှကျ ဒူးရငျးအရသာစုံနပွေီဆို ဒူးရငျးမီးဖုတျလေးတော့ ဘယျလိုအရသာလဲဆိုတာ ဒီ Paradise Bakery မှာ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လာမွညျးကွညျ့ပါဦးလို့။